Prakash Khabar:: पीडितलाई सक्दोे सेवा, सुबिधा दिएका छौं Prakash Khabar
पीडितलाई सक्दोे सेवा, सुबिधा दिएका छौं
June 16, 2019 | 800 Views
नेपालले ११० मुलुकमा संस्थागत रुपमा बैदेशिक रोजगारमा जान खुल्ला गरेको छ । त्यसैगरी व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा १७२ वटा मुलुकमा नेपालीहरु कामका लागि वैदेशिक रोजगारमा गएका छन । नेपाली कामदारको मुख्य गन्तव्यका रुपमा रहेको मलेसिया, कतार, साउदी अरब र युएई रहेका छन । उनीहरुले बिदेशमा रहंदा भोग्नु परेका पीडा र समस्याको सम्बोधन गर्ने निकाय बैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयल हो । सचिवालयले बैदेशिक रेजगारीमा गएका कामदारको लागि के कस्ता कार्यहरु गरिरहेको छ र बोर्डका समस्या र चुनौती के हुन यिनै बिषयमा कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठसँग प्रकाश साप्ताहिकका बोधराज पौडेल र रामहरी चौलागाईँले गरेको कुराकानी ।
तपाईं कार्यकारी निर्देशक भएर बोर्डमा आएपछि अहिले के कस्ता नयाँ योजना र कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहनु भएको छ ?
म यहाँ कार्यकारी निर्देशक भएर आएको करिब १० महिना भयो । यी दश महिनामा कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने काम भएको छ । पहिले हाम्रो कार्यालय अपायक स्थानमा थियो । जहाँ सेवाग्राहीले सेवा लिनका लागि धेरै समय खर्चनु पर्ने अवस्था थियो । अहिले यहाँ (बिजुली बजार) आएपछि सेवाग्राहीलाई सजिलो भएको छ । सेवाग्राहीको सबै प्रकृया मिलेको कामको लागि हामीले दुई घण्टाभित्र फत्ते गरिदिने गरेका छांै । साथै हामीले कल सेन्टरको स्थापना गरेका छौं । जसको माध्यमबाट सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायसँग कसको के विषयसँग सम्बन्धित सुझाव र गुनासाहरु सुन्ने ब्यवस्था गरिएको छ । यो कल सेन्टरमार्फत सजिलो तरिकाले सम्बन्धित विभाग, मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायसँग सजिलो तरिकाले आफ्ना कुरा राख्ने र जानकारी लिने सुविधा रहेको छ । वैदेशिक रोजगारको क्रममा ठगिएका र समस्यामा परेका व्यक्तिहरुको समस्या समाधान गर्ने र उद्घार गर्नुपर्ने अवस्था भएमा सो समेत गर्नेगरी कलसेन्टरमार्फत काम भइरहेको छ । पीडितहरुको समस्या सुनेर त्यसलाई निराकरण गर्नका लागि छिटो तरिकाले काम गरिरहेका छौ । हाम्रो मुख्य काम भनेको कामको सिलसिलामा विदेशमा फंसेका अंगभंग भएका ब्यक्तिहरुलाई सहयोग र उद्घार गर्ने । रोजगारीको क्रममा विदेशमा मृत्यु भएकाहरुको शब नेपाल ल्याउनमा सहयोग गर्ने । बिदेशमा कामको शिलशिलामा मानसिक समस्या वा अंगभंग भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति र ब्यवस्थामन मिलाउने । उनीहरुलाई कुन तहको समस्या हो सोही अनुरुपको परामर्श गर्ने हाम्रो काम हो । अंगभंग भएकाहरुलाई उनीहरुको परिवारमा बस्ने वातावरण मिलाउने । कुनै गम्भीर प्रकारको रोगको शिकार भएकालाई उपचारमा सहयोग गर्ने । उनीहरुका बालबालिका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने । मानसिक रोगीहरुको उपचार र परिवारमा बस्न सक्ने वातावरणको विकास गर्ने कार्यहरु हामीले गर्दै आइरहेका छौं । यसैगरी कामदार विदेश जानुपूर्व उसले घरबाट निस्केपछि गन्तब्य सम्मका पुग्नका लागि के के आवश्यक छ भन्ने कुराको बारेमा समेत जानकारी दिने तालिम बोर्डले सञ्चालन गरिरहेको छ । यसमा उसको रहनसहन, ब्यवहार, आनीबानी जस्ता कुराहरुको बारेमा जानकारी दिने र, उसका लागि आवश्यक पर्ने कम्तीमा पनि ३०० शब्द जानेर जानुपर्छ भन्ने हामीले महशुस गर्यौ र सोही अनुरुप तालिमको रुपरेखा परिवर्तन गरेर तालिमको काम भइरहेको छ ।
बिदेश जाने कामदारको लागि बोर्डले के–कस्ता जनचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ ?
पहिला तालिमको कोर्ष एकै किसिमको थियो । अहिले भने हामीले देश अनुसार त्यसलाई लानुपर्छ भनेर फरक देशको लागि फरक तरिकाको तालिमको सुरुवात गरेका छौं । सिप तालिमको पनि परिक्षण गरेर मात्र काममा जानका लागि हामीले अनुरोध गरेका छांै । यसको उद्देश्य भनेको सुरक्षित र मर्यादित बनाउनका लागि हो । हामीले उनीहरुले सिकेको सिपको परिक्षण गरेर प्रमाण पत्र दिने ब्यवस्था मिलाएका छांै । अर्को कुरा सहुलियत ऋणको कुरा भयो । हामीले क वर्गका बाणिज्य बैंकहरुसँगको सहकार्यका यो काम गरिरहेका छांै । सूचीकृत भएका ऋणहरुलाई वित्तिय साक्षरता कार्यक्रम पनि चलाइरहेका छौं । यसले उनीहरुको क्षमताबृद्घि भएर थप प्रभावकारी हुन्छ भन्ने आशा लिएका छौं ।
कल्याणकारी कोषको अवस्था के रहेको छ ?
कल्याणकारी कोषमा अहिले करिव ४ अर्ब ७५ करोड रकम जम्मा भएको छ । त्यसको ६० प्रतिशत रकम कल्याणकारी काममा खर्च हुन्छ । यसमा वैदेशिक रोजगारको शिलशिलामा करार अवधीमा कामदारको मृत्यु भएका कामदारको परिवारलाई सातलाखसम्म दिने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै करार अबधीमा अंगभंग भएका उसको अवस्था हेरी २१ हजार देखि सातलाख सम्मको सहायता दिने गरिन्छ । अर्को भनेको विदेशमा रहेको अवस्थामा उसका परिवारलाई पाँच प्रकारका घातक रोग लागेमा ५० हजारसम्मको सहायता दिने व्यवस्था रहेको छ ।
कसैको शब विदेशमा अलपत्र छ भने त्यस्ता शबहरु झिकाउने र उसको घरसम्म निशुल्क पु¥याउने काम गरिन्छ । शब झिकाउने काम आफंैमा गार्हो काम पनि हो । कुनै देशबाट शब झिकाउनु प¥यो भने त ५ हजार डलरसम्म खर्च लाग्छ । यो काम गर्न सबै पीडित परिवारले गर्न सक्दैनन्, जुन काम बैदेशिक रोजगार बोर्डले गर्दै आएको छ ।
कल्याणकारी कोषमा रहेको रकम पारदर्शी र व्यवस्थित ढंगले खर्च नगरेको आरोप तपाईंहरुमाथि लाग्ने गरेको छ नि ?
यो कोषलाई प्रभावकारी गर्नका लागि विभिन्न बाणिज्य बैंकहरुमा जम्मा गर्ने गरिएको छ । पहिले चल्ती खातामा पैसा राख्ने गरिएको रहेछ । म आएपछि त्यसलाई बचत खातामा सार्ने काम भएको छ । जुन खाताबाट ब्याजसमेत आउँछ । त्यो रकमलाई पनि हामीले कल्याणकारी कोषको बृद्धि पुँजीको रुपमा लिएका छांै । अहिले हाम्रो बचत खातामा ८० करोड रहेको छ । जसको ब्याज पनि राम्रै आउँछ । त्यो पैसा पनि कामदारको नाममा नै खर्च हुन्छ । गरिब कामदारले बिदेश जादा कल्याणकारी कोषमा १ हजार ५ सय तिर्नुपर्छ । उनीहरुले तिरेको रकम नै हामीहरुले उनीहरुकै हितमा खर्च गर्ने हो । कामदारले बिदेश जाँदा तिरको सो रकमलाई अधिक रुपमा प्रयोग गर्ने हाम्रो ध्येय रहेको छ ।
तपाईँहरुले दिने सेवा, सुबिधाप्रति सेवाग्राहीहरुको निक्कै गुनासो छ, यसमा तपाईंको भनाई केछ ?
कागजात मिलेमा हामी दुई घण्टाभित्र सेवा दिन्छौ । कागजात नमिलेकाहरुलाई तपाईँको यी कुराहरु पुगेको छैन, ती अपुग कुराहरु मिलाएर आउनुहोस् भनेर टिपोर्ट गरेर दिन्छौ । काजजात पुगेपछि हामी तुरुन्तै सेवाग्राहीलाई सेवा दिन्छौ । सकेसम्म कागजपत्र मिलेका सेवाग्राहीलाई सोहिदिन नै काम गरेर पठाउने गरेका छौं । कागजपत्र नमिलेकालाई सोहि बमोजिमको प्रक्रिया पु¥याएर आउन आउन अनुरोध गर्छौ ।
बिदेशमा काम गर्ने शिलशिलामा अहिले सम्म कति जनाले ज्यान गुमाएका छन, पीडितहरुलाई बोर्डले कस्तो किसिमको सहुलियत दिएको छ ?
अहिले सम्म १ सय ५६ महिला र ६ हजार ८ सय पुरुष गरी जम्मा ६ हजार ९ सय ५६ जनाको मृत्यु भएको छ । प्रत्येक मृतकका लागि ७ लाखका दरले भुक्तानी गर्दा १ अर्ब ६७ करोड ८४ लाख ८४ हजार खर्च भएको छ । महिला १८, पुरुष ८९९ गरी ९ सय १७ जनाको शब ल्याइएको छ । ती शब झिकाउन ६ करोड ९८ लाख ४४ हजार खर्च भएको छ । त्यसैगरी शब ढुवानीका लागि ४ करोड २९ लाख ८६ हजार खर्च भएको छ । अंगभंग भएका १ हजार २ सय ७२ जनालाई सहायता गरिएको छ । यसको रकम १६ करोड ८६ लाख १७ हजार ३ सय १७ खर्च भएको छ । खोजतलासमा एक सय एघार जनाको निवेदन परेको र खोजतलासका लागि २ करोड ९० लाख खर्च भैसकेको छ । कामदारका परिवारलाई सहायता स्वरुप २४ लाख ९५ हजार खर्च गरेको छ । यसरी हेर्दा वोर्डले २ अर्ब २ करोड खर्च गरेको छ । वोर्डले केही गरेन र गरेको छैन भन्ने आरेपमाथी सत्यता छैन । यस्ता काम हामी गरिरहेका छौं । तर, यो मात्र प्रयाप्त भने होइन ।
यस्तो ब्यभार राज्यले बोक्नु भन्दा वैदेशिक रोजगारीलाई न्युनिकरण गर्न अब गर्नु पर्ला त ?
अहिले राज्यले विभिन्न खाले योजनाहरु अघि सारेको पाईन्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अबधारणा पनि यही हो । यस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न सकेको खण्डमा यी समस्याहरु विस्तारै हटेर जानेछन् । नागरिकको अधिकार भएका कारण रोक्न भने समस्या देखिएको छ । हाम्रो चाहना भनेको सुसुचित भएर जाउ भन्ने हो । यसको अर्थ केहो भने पुरै रोक्न नसके पनि सुरक्षित र आम्दानी गर्न सकिने गरी सिप सिकेर जाउ भन्ने हो । अबको हाम्रो पहल भनेको ब्यवस्थित र सुरक्षित तरिकाले पठाउने भन्ने नै हो ।
शारीरिक समस्या र अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या भएकाहरुका लागि पुनः एकीकरणको योजना भित्र के के छन ?
हामीले त्यसका लागि उसको समस्या अनुसारको मनोपरामर्श र अन्य तालिमहरुको योजना गरेका छांै । जुन मनोपरामर्श पश्चात उनीहरुलाई पारिवारिक र सामाजिक एकीकरणमा लान सकिन्छ । त्यसका लागि हामी केही सहायतासमेत गरेर साउनदेखि लागु गर्ने तयारीमा रहेका छौं ।
सचिवालयले बिदेशमा जाने कामदारले तिरेको १५ सय रकमको सदुपयोग भन्दा पनि बढि दुरुपयोग भएको छ भनिन्छ, वास्तबिकता केहो ?
यसमा सत्यता छैन । हामीले कामदारले तिरेको रकमको अधिकतम उपयोग गर्दै कामदार लक्षित थुप्रै कल्याणकारी कार्यहरु सञ्चालन गरेका छौं । पीडित कामदार र तिनका परिवारलाई दिइने सहयोग निबेदन दिएको दिनमा नै लिनसक्ने गरी व्यवस्था मिलाएका छौं । पीडित कामदारको उद्धार तथा सहयोगको लागि बोर्ड सचिवालयमा अलग्गै कक्षको व्यवस्था गरी सिघ्र उद्धारको व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी बैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको अंगभंग हुँदा दिइने उपचार खर्च १ लाख ५० हजारबाट बढाएर ७ लाख पु¥याएका छौं । कामदारको मृत्यु भएमा परिवारलाई दिइने आर्थिक सहायताको रकम पनि ७ लाख नै पु¥याइएको छ । कामदारको परिवारको सदस्यलाई गम्भिर रोग लागेमा ५० हजार औषधी उपचार खर्च दिने व्यवस्था मिलाएका छौं । कामदारको बैदेशिक रोजगार बीमाको रकम १५ लाख पु¥याइएको छ । बेदेशिक रोजगारका क्रममा नेपाली कामदारलाई लाग्नसक्ने १५ प्रकारका मुख्य रोगहरु समेटी ५ लाख बराबरको स्वास्थ्य उपाचार बीमाको व्यवस्था गरिएको छ । मृतक कामदारको शब स्वदेश ल्याउन पहल गर्ने गरिएको र मृतकको घरसम्म शब बाहनको सुबिधा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाएका छौं ।